(၁၂) ကြိမ်မြောက် ပြင်ဦးလွင် ပန်းပွဲတော်တွင် ပန်းအစစ် ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပန်းအတု ၂ဝ ရာခိုင? - Yangon Media Group
(၁၂) ကြိမ်မြောက် ပြင်ဦးလွင် ပန်းပွဲတော်တွင် ပန်းအစစ် ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပန်းအတု ၂ဝ ရာခိုင?
ပြင်ဦးလွင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၆-ပြင်ဦးလွင် မြို့ အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ် တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိကျင်းပသည့် (၁၂)ကြိမ် မြောက် ပြင်ဦးလွင်ပန်းပွဲတော်တွင် ပန်းအမျိုးအစား ၄၈ မျိုးနှင့် ပန်းပေါင်း တစ်သိန်းခုနစ်သောင်းကျော် စိုက်ပျိုး ပြသထားပြီး ပန်းအစစ် ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ပန်းအတု ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင် ကြောင်း သိရသည်။
”ဒီနှစ်ပန်းပွဲတော်ကို တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ်မတူအောင် ကြိုးစားပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ပန်းအတုကျမှကိုယ်လိုချင်တဲ့ကာလာအစုံရတာပေါ့။ ပန်းနဲ့ ရုပ်လုံးရုပ်ြ<ွကဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ ပန်းအတုကမပါလို့ မဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဒီနှစ် ပန်းအတု ငါးရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပြီး ပန်းအစစ်ကို ပိုမိုထည့်သွင်းပြသထား ပါတယ်'' ဟု အမျိုးသားကန်တော်ကြီး ဥယျာဉ် စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ ဦးဝေမျိုး အောင်က ပြောသည်။
ပြင်ဦးလွင်ပန်းပွဲတော်တွင် ယခင် နှစ်က ပန်းအစစ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပန်း အတု ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခင်းကျင်းပြသခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် ပန်းအစစ် ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပန်းအတု ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းခင်းကျင်းပြ သထားရာ ယခင်နှစ်ထက် ပန်းအတု ပါဝင်မှု ငါးရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချခဲ့သည်။
ပြင်ဦးလွင်ပန်းပွဲတော်တွင် ပထမအကြိမ်မြောက် Lifestyle Connection ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ပြီး အဆိုပါဈေးပွဲတော် တွင် အလှကုန်ပစ္စည်း၊ စားသောက်ကုန်၊ အဝတ်အထည် စသည့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဒေသခံများ၏ ဒေသ ထွက်ကုန်များကို ဆိုင်ခန်း ၅ဝ ကျော် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး Singing and Dancing Concert, Lucky Draw Program ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် များ၊ Quiz test အစီအစဉ်များအပြင် ကလေးငယ်များအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် ရာ ကလေးကစားကွင်းများ ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
ပြင်ဦးလွင်အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ် နန်းမြင့်မျှော်စင်အနီး၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် Big Bag၊ Idoits၊ ဝေလ၊ ဂျီလတ်၊ ဝန၊ အယ်ဒီ၊ အယ်ပီ၊ Soul Seven Jewel ၊ အိုင်း ရင်းဇင်မာမြင့်၊ သော်တာချမ်းမြေ့၊ လမင်းတို့ကလည်းကောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ရွှေထူး၊ လွှမ်းပိုင်၊ X Box ၊ နိုင်းဝမ်း၊ LilZ၊ ထက်ယံ၊Oasix၊ Y Zet ၊ ဝေထွန်း၊ Bobby Soxer၊ ဝိုင်းလေး၊ DJ K Gyil Black T Z Cz (Double, JNJ, Reload, RB, Myat Amare Maung) တို့လည်းကောင်း ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်ပြီး ¤င်းနေ့များအတွက် လက်မှတ်ခများ မှာ တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၆ဝဝဝ သတ်မှတ် ထားကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့အတွက်ပေးပ?
မေတ္တာငတ်သူတို့၏ မျှော်လင့်ချက်နိဗ္ဗာန် Just Between Lovers ဇာတ်လမ်းတွဲ
ဂျပန်ရောက် မြန်မာလုပ်သား ၉ဝဝဝ ကျော်အနက် ထွက်ပြေးသည့် လုပ်သား ၄ဝဝ ကျော် ရှိဟုဆို
မန္တလေးမြို့တွင် လူနှစ်ဦးအား သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်သူဟုဆိုသူကို ဆက်လက်စစ်ဆေးရန် ချုပ်ရမန်ရယူ